Ogaden News Agency (ONA) – Gudiga fulinta JOKA oo shir ku qabtay Xafiiska faraca East London ee Jaaliyada Ogadeniya ee Konfur Afrika
Gudiga fulinta JOKA oo shir ku qabtay Xafiiska faraca East London ee Jaaliyada Ogadeniya ee Konfur Afrika
Posted by ONA Admin	/ May 31, 2013
Faraca Jaaliyadda Ogadeniya ee magaalada East London ee gobolka Eastern Cape iyo wafdi ka socday gudiga fulinta Jaaliyadda Ogadeniya ee Koonfur Africa oo uu hogaaminaayay gudoomiyaha Jaaliyadda JOKA Mudane Cabdiraxman Siciid kana soo ambabaxay magaalada Port Elizabeth ee Xuarunta gobolka Eastern Cape ayaa maanta Kulan ku yeeshay Xafiiska Faraca East London.
Shirkan oo uu soo qaban qaabiyay Faraca Jaaliyadda Ogadeniya ee East London ayaa waxaa ka sooqaybgalay dhamaan Xubnaha Faraca Jaaliyadda, wafdiga ka socday Xarunta JOKA ,iyo marti sharaf kale , shirkan ayaa ahaa shir Abaabul Kormeer iyo wadatashi isugu jiray iyada oo u jeedadiisa kowaad aheyd sidii loo sii xoojin lahaa waxqabadka Jaaliyada.
Waxaa shirka furay gudomiyaha Faraca Ileys (East London ) Jaale Axmed Tawakal wuxuuna ka warbixiyay Axmed xaalada Faraca wuxuuna sheegay inay dadka ku nool East London yahay shacab u ooman Xoriyada Ogadeniya islamarkaana diyaar u ah in ay sii xoo jiyaan waxqabad kooda ay ugu hiilinayaan Shacabka Somaalida Ogadeniya ee ay Xukuumada Itobiya gumaysato.
Dhankakale waxaa khudbad dheer oo ku aadan xaalada Somalida Ogadeniya ee ku nool wadanka Koonfur Africa iyo waxyaabaha la soo darsa iyo rabshadaha ka dhaca ee lagu wax yeeleeyo muwaadaniin u dhalatay Ogadeniya iyo warbixin guud oo Ogadeniya loogawaramay halkaas kasoo jeediyay Gudomiyaha. Gudomiyuhu waxuu sheegay in gumeysiga Ethiopia isku dayay waxkasta oo ay halganka Ogadeniya ku caqabadayn lahayd balse iyadii ayaaba burbur qarka u saaran isla markaana ku guul daraysatay qorshayaa-sheeda.
Shirkan oo ahaa shir Abaabul , Kormeer,iyo wadatashi ayaa ugu dambayntii maamul Cusub loogu sameeyay Faraca East London ee gobolka Eastern Cape.
kulankan oo ay ka hadleen Hooyooyin, dhalinyaro-aqoonyahano, masuuliyiin katirsan Ururka OYSU ee gobolka Eastern Cape , ayaa waxay dhamaan tood isku raaceen sidii loo garab istaagi lahaa shacabka Somalida Ogadeniya ee ay Ciidamada Itoobiya kula kacaan falalka arxan darada ah ee ka dhanka ah xuquuqda aadamaha